I-El Pedraforca, uphawu lweCatalonia | Izindaba Zokuhamba
Enric Gili | | Barcelona, España, General, Ukuzilibazisa
Namuhla ngizo imininingwane ye ukukhuphukela ePedraforca, enye yezintaba ezaziwa kakhulu futhi eziyizifanekiselo zeCatalan Pyrenees. Uhambo olunconywe ngokuphelele lwabathandi bezintaba nemvelo.
IPedraforca yintaba etholakala esifundeni iBeguedá (esifundazweni iBarcelona) futhi ikakhulukazi eSerra del Cadí (Cadí i Moixeró Natural Park), eCatalan Pre-Pyrenees. Ineziqongo ezimbili ezivelele, iPollegó Superior (ene ukuphakama kwama-2.506 m) nePollegó inferior (2445 m).
Lalivikelwe ngokusemthethweni ngo-1982 futhi ligcina igama lalo entweni elenzayo kanye nokwakheka kwehhashi ezintabeni zalo: IPedra itshe ngeSpanishi kanti iForca isicathulo sehhashi.
Kukhuphuka kosuku olulodwa kepha kudinga kwezinye izikhathi zomzila. Kusukela ngoNovemba kuya kuMeyi iPedraforca likhithika, ngakho-ke qiniseka ukuthi ukhuphuka ngesikhathi esiphephile noma ngezingubo nezicathulo ezifanele.
1 Ungafika kanjani ePedraforca?
2 Ukwenyuka kuya ePedraforca
Ungafika kanjani ePedraforca?
Ukukhuphukela ePedraforca kungenziwa ngamaphuzu amaningi, impela okwaziwa kakhulu yikhona kusuka edolobheni laseGòsol nasendaweni yaseLluís Estaen ephakeme yokuphephela. Ngizokutshela ngohambo oluphuma esiphephelweni nokuwela iColl del Verdet.
Ukufika endaweni yokukhosela kufanele siqale phansi ci-arretera nacional C-16 exhumanisa uManresa neBerga nePuigcerdà, Cerdanya kanye neCatalan Pyrenees ngomhubhe waseCadí. Uma sishayela enyakatho kufanele siwele idolobha laseBerga, bese kuthi iCercs nesikhungo sayo samandla kagesi ashisayo futhi ngaphambi kokufika eGuardiola de Berguedà sizobona umgwaqo ongakwesobunxele okhombisa iSaldes, iGòsol nePedraforca ngomgwaqo wesifunda B-400.
Sizosakaza ezinye I-15 km kulo mgwaqo uze ufike eSaldes, Sizowela leli dolobha futhi ngemuva cishe kwe-1Km sizobona i- gudla ngakwesokudla ubheke esiphephelweni seLluís Estassen. 2Km ngaphezulu kulo mgwaqo wendawo size sifike endaweni yokupaka yokuphephela, lapho uhambo lwethu luzoqala khona.
Uma ufuna ukuhlala esiphephelweni, umgwaqo ufinyelela kuwo yize udinga imoto eyi-4 × 4, i-asphalt ayiyinhle kakhulu. Ngaphandle kwalokho angazi noma ungafika lapho ngemoto ngaphandle kokuningi. Ngokwami, kunginike umuzwa wokuthi ngeke kwenzeke, wonke umuntu ushiye imoto ebipakwe ngezansi wenza le ngxenye yokuqala ngezinyawo, cishe imizuzu eyi-15 yokuqwala kamnene.
Ukwenyuka kuya ePedraforca
Ukukhuphukela ePedraforca kudinga kuphela okwejwayelekile kwentaba yezicathulo nezicathulo. Uma ukuvakasha kwenziwa ebusika, cishe kuzoba khona iqhwa, ngakho-ke uma sikhetha ukukuqeda, kufanele sicabange ukuletha izicathulo zeqhwa namathuluzi okusiza eqhweni.
Uma sesipakwe endaweni egunyaziwe yokupaka sizothatha i- indlela ezosiyisa esiphephelweni sase-Estassen, cishe imizuzu eyi-15 ngezinyawo ngasemahlathini aluhlaza okaphayini omnyama nomsayipuresi, okujwayelekile endaweni.
Uma sesiphephele singakhuphukela ePedraforca nge imigwaqo emibili emikhulu, ngokusebenzisa lesi sikwele (owaziwa eCatalonia njenge-tartera) noma ngeColl del Verdet. Ngincoma ukuthi ukhuphuke ngeVerdet bese wehla (uma kungenzeka) ngesikwele. Ngenxa yenani elikhulu labantu abahamba intaba abenze ukwehla ngalesi scree, okwamanje kuyashelela kakhulu, noma ngabe ungehla ngakho. Ngingabuza abasebenzi bezokuphephela noma abagibeli bezintaba abanolwazi ukuthi isimo sabo silungile yini lokwehla.
Sengikushilo lokho, sizothatha indlela yeVerdet bese siqala ukukhuphuka. Ngokuphelele, ukwenyuka okuhambisana nalo mzila kufanele kwenziwe cishe Amahora ama-3 ukusuka e-Estassen cishe, ukungalingani okuqoqiwe kungamamitha ayi-1000 kusuka endaweni yokupaka.
Ingxenye yokuqala idlula emahlathini aluhlaza futhi ithambeka limnene, sizogquma intaba. Kancane kancane umthambeka uzokhula futhi nezwe lizoshintsha ngokuphelele lisuke ezihlahleni ezinkulu liye emadwaleni amakhulu nasemihosheni. Lapho sesikhuphuke intaba cishe ihora elilodwa, indlela isivele izungeza ngokulandela iphrofayili yentaba. Ngakwesobunxele sethu sizobona iziqongo zePedraforca nangakwesokudla samamitha ayi-1 wokungalingani nengxenye yezinhlelo zeBerguedà nezasePyrenean.
Ngaso sonke isikhathi indlela ikhonjiswe ngokuphelele futhi ngesikhathi esithile izositshela ukuthi jikela kwesobunxele ngaseVerdet. Ngalesi sikhathi ithambeka selivele liqala ukubonakala.
Ngemuva kwemizuzu embalwa sizofika eColl del Verdet, iphuzu eliphakathi kwezintaba futhi elixhuma indlela esiyilandelayo nalabo abavela eGòsol.
Ukusuka lapha ukukhuphuka kwangempela kuqala, imizuzu yokuqala ilula impela ngokusebenzisa indawo enamadwala ejwayelekile yendawo. Ingxenye yesibili, mhlawumbe enzima kakhulu, inokuthambekela okukhulu. Indlela, esivele ifiphalisiwe, inezintambo ukuze abantu bakwazi ukuyenza ngaphandle kwezinkinga. Lapha ngeke sisakwazi ukuhamba, sizokhasa futhi sicishe sikhuphukeUkukhuphuka kuyinkimbinkimbi kepha ngombono wonke umuntu ohamba ngezinyawo angakwenza.
Ingxenye yesithathu neyokugcina ilula kunale eyedlule kepha isenesidingo somzimba esimangazayo. Manje kuphela ukwehla kokugcina nokukhuphuka kokugcina ezindaweni ezinamadwala okuzosala ukufinyelela ePollegó Superior, indawo ephakeme kakhulu yePedraforca nenhloso yethu yokugcina.
Ukusuka lapha singanquma uma sihlehlisa umgwaqo ukuze sibuyele emotweni noma uma sehla ngesikhalazo phakathi kwalezi «Pollegons» ezimbili. Uma sehla saya khona sizoshesha kodwa kuyingozi kancane futhi kuyashelela, bheka ukuthi abantu bayehla ngaphandle kobunzima nokuthi isimo sezulu sihle yini.
Impela futhi njengoba isihloko sendatshana sikhombisa, ukuvakasha nokukhuphukela ePedraforca kungenye yemizila yezinganekwane nezifanekiselo zeJografi yaseCatalan, kunconywe ngokuphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Barcelona » U-El Pedraforca, uphawu lweCatalonia
Amabhishi esihlabathi esimnyama ayi-8 amangalisa kakhulu